Budata Avira Free Antivirus maka Windows
Budata Avira Free Antivirus
Free Budata maka Windows (4.58 MB)
Budata Avira Free Antivirus,
Avira Free Antivirus bụ antivirus efu siri ike maka ndị ọrụ chọrọ ichebe kọmpụta ha megide nje, trojans, ndị ohi njirimara, ikpuru, malware na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na-enye ndị ọrụ interface ahaziri nke ọma na nchekwa data antivirus na-emelite mgbe niile megide iyi egwu kachasị ọhụrụ, mmemme ahụ bụ nhọrọ nke mbụ maka ndị ọrụ chọrọ iji egwuregwu nke aka ha mee egwuregwu ahụ. Avira Free Antivirus, nke ndị ọrụ kọmpụta nke ọkwa niile nwere ike jiri ya mee ihe nụzọ dị mfe, nihi ịdị mfe iji ya na nghọta onye ọrụ nwere nghọta, na-enye ndị ọrụ ya ọbụna ntọala dị mgbagwoju anya nụzọ dị mfe.
Avira Free Antivirus, nke ga -amalite na -akpaghị aka mgbe usoro nrụnye dị mfe ma hụ na nchekwa sistemụ gị, na -enye gị ndụmọdụ ka ịgbanyụ Firewall Windows noge nrụnye. Noge a, ọ bụ gị ka ọ dị naka ikpebi. Ị nwere ike gbanyụọ Windows Firewall ma jiri firewall nke Avira ga -enye gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịga nihu na Firewall Windows. Noge a, aro m nyere gị bụ na ịkwesighi iwepu Firewall Windows ka ị nwee ike na -arụ ọrụ nke ọma ma Windows Firewall na Avira Free Antivirus firewall.
Mmemme a, onye ọsọ nke inyocha kọmputa gị maka ihe egwu karịrị nke nkịtị, na -enyocha kọmputa gị ngwa ngwa maka nje. Nezie, noge a, ọnụọgụ data dị na kọmputa gị yana ntiwapụ nje nwere ike ịbawanye oge nyocha. Avira Free Antivirus bara ezigbo uru na nke a, na -enye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ nyocha dị ka draịvụ mpaghara, draịvụ ike mpaghara, draịva mbughari, ndekọ sistemụ Windows, nyocha sistemụ zuru oke, nyocha ngwa ngwa, akwụkwọ, usoro na -arụ ọrụ na nhọrọ ntuziaka.
Mmemme a, nke ga-echebe kọmpụta gị megide ụdị ihe egwu ọ bụla nwere ike ịpụta site na mpụga, ekele maka njirimara nyocha ya ozugbo, na-enyekwa nkwado nchekwa maka weebụ na ozi ịntanetị. Na mgbakwunye, Avira Free Antivirus, nke na -egbochi ihe enyo na ngwa ọ na -achọpụta na kọmputa gị, nihi firewall nke ya, na -enye nchebe dị irè.
Site na njiri mara ya dị mfe ma dị mfe, nchebe nje ozugbo, nchekwa data na-emelite oge niile, ozi ịntanetị na nchekwa weebụ, nhọrọ nyocha dị iche iche, nkwado asụsụ Turkey, nefu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, Avira Free Antivirus na-echebe kọmputa gị pụọ nihe egwu niile. Ọ kwesịrị ịbụ otu nime nhọrọ mbụ nke ndị ọrụ chọrọ idobe ya.
Atụmatụ Antivirus Free Avira:
Email na nchedo weebụ
Na -egbochi malware na ihe omume
Nchedo dị mma megide adware na spyware
Pịa otu mwepụ nje
Easy echichi na ojiji
Ọdịmma onye ọrụ nwere ọmarịcha yana ụdị ọgbara ọhụrụ
Avira Free Antivirus Ụdịdị
Nha faịlụ: 4.58 MB
Mmepụta: Avira GmbH
Kacha ọhụrụ na: 17-10-2021